अर्थ तथा बाणिज्य Archives - Aajavoli
अर्थ तथा बाणिज्य
Gopi Bhattarai २८ माघ २०७४, आईतवार February 11, 2018
काठमाडौं । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको छ। नेपाल सन् २००६ देखि खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो। जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक, २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो। सर्वेक्षण प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गरिन्छ। दक्षिण
Gopi Bhattarai २८ माघ २०७४, आईतवार
त्रिशूली । बेलकोटगढी नगरपालिकाका किसानलाई किबी खेतीमा आकर्षित गराउन नगरपालिकाले अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्न थालेको छ । नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रको बजेटबाट किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा किबीको बिरुवा वितरण गरिएको हो । चिनी रोग र उच्च रक्तचापका बिरामीलाई उपयोगी हुने यो फल रु ३५० प्रतिकिलो ग्रामका दरले बिक्री हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत छविलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
ललितपुर । हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लावासीले जडीबुटी संरक्षणसँगै त्यसबाट मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन् । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार परियोजना मार्फत १० जिल्लाका किसानले जडीबुटीलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन थालेका हु्न् । चिराइतो, अल्लो जटामसीलगायत जडीबुटीको संकलन भइरहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाका निर्देशक विजयकान्त झा भन्नुहुन्छ, “अहिले जंगलमा कुहिएर खेर जाने जडीबुटीबाट त्यहाँका
खुम्चदै चिया निर्यात
Gopi Bhattarai १३ माघ २०७४, शनिबार January 27, 2018
हरिप्रसाद कोइराला विराटनगर । नेपालबाट भारत र समुन्द्रपारि जाने कृषि उत्पादनको निर्यात पछिल्लो चार वर्षयता लगातार ओरालो लागेको छ । निर्यातको ठूलो हिस्सा ओगटेको चियाजन्य उत्पादनको निर्यातसमेत घट्दै जाँदा व्यापार घाटासमेत बढेको छ । आव ०७०÷७१ सम्म चिया व्यापारले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका अनुसार आव २०७०÷७१ मा
क कस्ले गरे दुग्ध विकास संस्थानमा घोटाला ?
Gopi Bhattarai १२ माघ २०७४, शुक्रबार
दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले पछिल्ला तीन वर्षमा २ करोड ४९ लाख ४२ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ घोटाला गरेका छन्। संस्थान सञ्चालक समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तीन वर्षयता संस्थानका विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले राजस्व भुक्तानी, जिन्सी सामग्री बिक्री, पेस्कीलगायतका शीर्षकबाट संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याउने गरी घोटाला गरेको देखिएको हो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका छापिएको छ। धेरै कर्मचारीले दूध, दही, घिउ, पनिरलगायत
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गैँडाछाप सिमेन्ट उत्पादनमा वृद्धि
Lok Awasthi २७ पुष २०७४, बिहीबार January 14, 2018
उदयपुर । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुरको जलजलेस्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गैँडाछाप सिमेन्ट उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार उद्योगको मेशिन मर्मत र सुधारमा समेत राम्रो व्यवस्थापन भएका कारण अहिले उत्पादन प्रतिदिन ७०० मेट्रिक टन पुर्याइएको हो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्रतिदिन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता झण्डै ८०० मेट्रिक टनसम्म रहेको छ । विगतका दिनमा प्रतिदिन ६०० मेट्रिक टन
Lok Awasthi २७ पुष २०७४, बिहीबार
भास्कर के.सी, कञ्चनपुर । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित वडा नं. १८ मा गल्ली नं. १ को फ्रि लाइनमा आफनो शाखा विस्तार गरेको छ । देशभरि ११ शाखा खोलिएको र १२ औं शाखाको रुपमा विहिबार पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती साथै एकता दिवसको अवसर पारेर शाखा विस्तार गरेको छ । साथै कञ्चनपुरमा रहेका धेरै बीमा
Lok Awasthi १३ पुष २०७४, बिहीबार January 11, 2018
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै मिर्गौला काम नगर्ने, क्यान्सर रोगी र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका अपांग बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुससार सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अशक्त बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । यस कार्यक्रमबाट लागभग २० हजार
Lok Awasthi ११ पुष २०७४, मंगलवार January 11, 2018
कैलाली । धनगढीमा आयोजित २०७४ सालको सुदूरपश्चिम महोत्सव करिब १५ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । पुष १० गतेदेखि शुरु भएको उक्त महोत्सव मंगलबार सकिएको छ । महोत्सवमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको र करिब ५ लाख दर्शकले अवलोकन गरेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताए । उनले महोत्सव आयोजनाले महोत्सवभित्रकोमात्रै नभएर समग्र क्षेत्रको आर्थिक कारोबारमा वृद्धि